Shina dia nitifitra ny mpanamboatra turbine mpitrandraka turinina - Puhua
an-trano > Products > Fitaovana fanapoahana basy > Turbine miparitaka
1.Fampidirana Turbine Blasting Blasting
Turbine blast shot mivantana an'ny torolàlana mivantana dia kodiarana fipoahana mahery vaika, ny tombony dia endrika tsara tarehy, fanamafisana matevina, lownoise, toekarena ary fiarovana ny tontolo iainana. Manana ny herinaratra lehibe indrindra sy ny taham-pahavoazana mahery vaika indrindra. Ampiasaina amin'ny karazana tifitra rehetra izy io milina fanadiovana fipoahana. Ny vidin'ny pabrikan'ny turbine shot shot ho an'ny karazana milina fanapoahana tifitra rehetra. Ny orinasanay dia nitifitra turbine nitifitra, turbine notifirina mivantana ary nitifitra turbine nitifitra turbinina nanapoahana ny mpanjifa hisafidy.
2.Famaritana ny turbine miparitaka amin'ny tifitra:
Karazana Diameter an'ny Impeller (mm) Hafainganana ny hafainganam-pandeha (r / min) Maximun fahafaha mikoriana (kg / min) Herin'ny motera (kw)
Azontsika atao ny mamolavola sy manamboatra karazana turbine Shot Blasting turbine tsy mifanaraka amin'ny fenitra arakaraka ny fepetra takiana amin'ny mpanjifa amin'ny antsipirian'ny workpiece, ny lanjany ary ny famokarany.
3.Tetiboky ny turbine nanapoaka basy:
4. Fanamarinana ny turbine miparitaka amin'ny tifitra:
Ny orinasanay dia nandalo mari-pahaizana CE, ISO. Vokatry ny turbine Shot Blasting izay manana kalitao avo lenta :, serivisy ho an'ny mpanjifa sy vidiny mifaninana, nahazo tambajotram-barotra eran-tany nahatratra firenena 90 mihoatra ny kontinanta dimy izahay.
2. Ahoana ny fametrahana turbine shot shot :?
4. Ahoana no hifehezana ny kalitaon'ny turbine Shot Blasting :?
5. Inona ny ampahany amin'ny asa azo diovin'ny Turbine Shot Blasting :?
Raha liana amin'ny Turbine Shot Blasting ianao :, azonao atao ny mifandray aminay.
Hot Tags: Turbine miparitaka, mividy, namboarina, be indrindra, Sina, mora vidy, fihenam-bidy, vidiny ambany, mividy fihenam-bidy, lamaody, farany, kalitao, mandroso, maharitra, mora raisina, fivarotana farany, mpamokatra, mpamatsy, orinasa, ao anaty tahiry, santionany maimaimpoana , Marika, vitaina any Chine, Vidiny, Lisitry ny vidiny, Teny nalaina, CE, Warranty herintaona